Goalong5वर्ष मिश्रित माल्ट व्हिस्की 700ml 47% abv Bourbon ब्यारेल एजिङ, चाइना Goalong5वर्ष मिश्रित माल्ट व्हिस्की 700ml 47% abv Bourbon ब्यारेल एजिङ उत्पादक, आपूर्तिकर्ता, कारखाना - गोलोङ लिकर (समूह)
आपूर्ति क्षमता: 5000००० डिब्बाहरू / दिन
गोलोङ मिश्रित माल्ट व्हिस्की
1. गन्ध: गहुँ र अमृत सुगन्ध को समृद्ध सुगन्ध
2. स्वाद: धनी सुगन्ध, धनी र मीठो संग सुरुचिपूर्ण स्वाद
3. समाप्त: अमृत लामो समय सम्म टिक्ने संग मीठो छ
4. बोर्बोन ओक ब्यारेलमा5वर्ष पुरानो
Goalong समूहले व्हिस्की, ब्रान्डी, भोड्का, जिन, क्राफ्ट बियर, प्राकृतिक चामल बाइजिउ, प्याकेज गरिएको पेय पानी, कार्यात्मक पेय पदार्थ र बहुविध पेय पदार्थहरूको उत्पादन, अनुसन्धान र विकास र बिक्रीमा केन्द्रित छ।
गोलङ समूह विith ठूलो आसवन इकाई र व्हिस्की डिस्टिलिङको लागि बुद्धिमानी केन्द्रीय नियन्त्रण प्रणाली। पूर्ण रूपमा स्वचालित बोतलिङ लाइन र आधुनिक उत्पादन कार्यशाला, Goalong समूहले प्रत्येक दिन 10000 स्वचालित उत्पादन बोतलिंग लाइनहरू 8 केस उत्पादनहरू उत्पादन गर्न सक्छ।
Goalong व्हिस्की र ब्रान्डी विश्वव्यापी रूपमा 50 भन्दा बढी देशहरूमा निर्यात, कुनै सुरक्षा दुर्घटना, 100% बिक्री पछि सेवा।
बोतल हस्तनिर्मित परिष्कृत स्पष्ट गिलासको बोतल
लेबल भुनी फूलको लेबल
ढक्कन कर्कको साथ टिन क्याप
रंग गोल्डन एम्बर
Goalong मिश्रित माल्ट व्हिस्की संग आफ्नो सप्ताहन्त थप विशेष बनाउनुहोस्। यो रूफटप बार्बेक्युजको लागि साथीहरूसँग गुणस्तरीय समय, र घाममा दिउँसोको लागि उपयुक्त छ। साथीहरूसँग साझेदारी गर्नुहोस्, वा बरफमा खन्याउनुहोस् र कागतको ताजा टुक्राले गार्निश गर्नुहोस्। सप्ताहन्तको नयाँ स्वादको लागि Goalong पाँच वर्षको शुद्ध माल्ट व्हिस्कीको मजा लिनुहोस्।